Ahlu-sunna Waljameeca oo shaacisay inay duullaan ku yihiin degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ahlu-sunna Waljameeca oo shaacisay inay duullaan ku yihiin degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud
Tan iyo markii degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ay la wareegeen dagaalyahanadda Al-shabaab kadib markii ay dhawaan halkaasi isaga baxeen ciidankii Itoobiyaanka ayaa waxaa sii korortay cabsida dagaal ee laga fillan karo in degmadaasi uu ka dhaco.
Maamulka Ahlu-sunna Waljameeca ee gobolada dhexe ayaa haatan shaaca ka qaaday inay isku diyaarinayaan in dagaal xoogan ay ku qaadaan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, islamarkaana ay halkaasi kala wareegaan Al-shabaab.
Madaxweynaha maamulka Ahlu-sunna Waljameeca Sheekh Maxamed Shaakir oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamadooda ay haatan diyaar u yihiin inay la wareegaan gacan ku haynta degmada Ceelbuur iyo deegaanada kale ee ku yaalla gobolada dhexe oo ay ciidamada Itoobiya ka baxaan.
Sheekh Shaakir ayaa ballan ku qaaday inay dib ula wareegi doonaan deegaanadii ay dhawaan isaga baxeen ciidamadda Itoobiya oo ay ka mid tahay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud.
Sidoo kale, Sheekh Shaakir ayaa sheegay in ciidamada maamulkooda iyo dadka shacabka ahna ay iskaashanayaan sidii ay Al-shabaab uga saari lahaayeen deegaanadii ay ka baxeen ciidamada Itoobiya.
Hadalkaan kasoo yeeray madaxweynaha maamulka Ahlu-sunna Waljameeca ee gobolada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir ayaa imaanaya xilli ciidamada Itoobiya ay maalmo ka hor isaga baxeen degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud.